World Wide Web Consortium၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အင်ဂျင်နီယာ နှင့် ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင် တင်မ် ဘာနာလီသည် ယခင်က ဟိုက်ပါတက်(စ်) စနစ်ကိုများ၏ အယူအဆကို အသုံးပြု၍ နောင်တွင် တဖြည်းဖြည်း World Wide Web ဖြစ်လာမည့် အဆိုပြုလွှာကို ၁၉၈၉ခုနှစ် မတ်လတွင် ရေးသားခဲ့သည်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျင်နီဗာမြို့ရှိ CERN တွင် Berners-Lee နှင့် Belgian ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံပညာရှင် Robert တို့သည် http://www.w3.org/TR/2005/WD-swbp-skos-core-guide-20051102/t Cailliau “အသုံးပြုသူများ ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်း လှန်လှောကြည့်ရှုနိုင်သည့် web တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် အမျိုးမျိုးသော သတင်းအချက်အလက်များကို ချိတ်ဆက်ရန်နှင့် ဆက်သွယ်ရယူရန် HyperText ” ကို အသုံးပြုရန် အဆိုပြုခဲ့ကြပြီး ဒီဇင်ဘာလတွင် စီမံကိန်းကို အများပြည်သူသို့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အာသာစီကလာ့ခ်(Arthur C. Clarke) က တစ်နေ့တွင် ဂြိုဟ်တုများသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် အချက်အလက် လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် ဗွီဒီယိုညီလာခံပြုလုပ်ခြင်း နှစ်မျိုးလုံးကို လုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးရန် မိတ္တူကူးစက်၊ တယ်လီဖုန်း၊ TV နှင့် ကွန်ပျူတာငယ်တစ်ခုတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပေါင်းစပ်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သော office console တစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် “ကမ္ဘာ့ ဗဟုသုတကို ကျွန်ပ်တို့၏ လက်ချောင်းထိပ်များဆီသို့ ယူဆောင်လိမ့်မည်” ဟု Popular Science တွင် ၁၉၇၀ခုနှစ် မေလတွင် ခန့်မှန်းခဲ့သည်။၁၉၈၉ခုနှစ် မတ်လတွင် တင်(မ်)ဘာနာ(စ်)-လီးသည် ၁၉၈၀ခုနှစ်က ၎င်း တည်ဆောက်ခဲ့သော ဒေတာဘေ့(စ်)နှင့် ဆော့(ဖ်)ဝဲ စီမံကိန်းဖြစ်သည့် ENQUIRE ကို ရည်ညွှန်းထားသော အဆိုပြုလွှာ တစ်ခုကို ရေးသားခဲ့သည်။အဆိုပြုလွှာတွင် ပိုမို၍ ပြည့်စုံသော သတင်းအချက်အလက် စီမံခြင်းစနစ်ကို ရှင်ပြထားသည်။
ရှင်းလင်းချက်များသည် ဤဖြစ်ရပ်၏ နေ့စွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သိသာစွာ ကွဲလွဲနေသည်။ World Wide Web Consortium က ၁၉၉၂ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလဟုဆိုပြီးSLAC ကိုယ်တိုင်ကမူ ၁၉၉၁ခုနှစ်ဟု ကြေငြာသည်။ဤသည်မှာ A Little History of the World Wide Web ခေါင်းစဉ်ရှိသော W3C စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုမှ ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Hypertext ၏ အဓိကျသော အခြေခံ အယူအဆမှာ Brown University ရှိ Hypertext Editing System (HES)၊ Tes Nelson ၏ Xanadu စီမံကိန်း နှင့် Douglas Engelbart ၏ oN-Line System (NLS)တို့ကဲ့သို့ ၁၉၆၀ခုနှစ်များက စီမံကိန်းအဟောင်းများမှ စတင်ခဲ့သည်။ Nelson နှင့် Engelbart နှစ်ယောက်လုံးကို ၁၉၄၅ခုနှစ်တွင် "As We May Think" စာစီစာကုံး၌ ဖော်ပြထားသည့် Vennevar Bush ၏ microfilm အခြေပြု "memex" က လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။
World Wide Web တွင် အခြား hypertext စနစ်များနှင့် ကွဲပြားခြားနားမှု အချို့ရှိသည်။ web သည် လမ်းညွှန်မှုနှစ်ခုပါသော ကွင်းဆက်များထက် တစ်ခုတည်းကိုသာ လမ်းညွှန်ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် တစ်စုံတစ်ဦးသည် အခြားအရင်းအမြစ်တစ်ခုသို့ ထိုအရင်းအမြစ်၏ ပိုင်ရှင်၏ လုပ်ဆောင်မှုမပါဘဲ ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ web server များနှင့် browser များ(အစောပိုင်း စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်) အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကြုံရသည့် အခက်အခဲအခဲကို သိသာစွာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် အကျိုးဆက်မှာ ကွင်းဆက်ပုပ်ခြင်း ပြဿနာကို ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ယခင် HyperCard နှင့်မတူဘဲ World Wide Web သည် တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းက ပိုင်ဆိုင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ server များနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ကွန်ပျူတာများကို အမှီအခိုကင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပြီး တိုးချဲ့မှုများကိုလည်း လိုင်စင်သတ်မှတ်ချက်များမပါဘဲ ထပ်ထည့်နိုင်စေသည်။ ၁၉၉၃ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့တွင် CERN က World Wide Web သည် အခကြေးငွေ ပေးစရာမလိုဘဲ လူတိုင်းအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ကြေငြာချက်အပြီး နှစ်လအကြာတွင် Gopher protocol သည် အခမဲ့ မဟုတ်တော့ချေ။ ဤသည်က Gopher ကို လျင်မြန်စွာ ဖယ်ရှားပြီး web ဆီသို့ ဦးတည်လာစေသည်။ အစောပိုင်း ရေပန်းစားသော web browser မှာ HyperCard ကို အခြေခံသော ViolaWWW ဖြစ်သည်။
World Wide Web သည် ၁၉၉၃ခုနှစ်တွင် စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော Mosaic Web browser ဖြင့် အစပြုခဲ့သည်ဟုပညာရှင်များက ယေဘုယျအားဖြင့် သဘောတူညီကြသည်။ ၎င်းသည် University of Illinois at Urbana-Champaign (NCSA-UIUC)ရှိ National Center for Supercomputing Applications မှ Marc Andreessen ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တစ်ခုက ဖန်တီးခဲ့သော graphic ဆိုင်ရာ browser ဖြစ်သည်။ Mosaic ကို High Performance Computing and Communication Act of 1991 က အစပြုခဲ့သော ရန်ပုံငွေအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး U.S. Senator Al Gore ရှေ့ဆောင်ခဲ့သော တွက်ချက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အများအပြားထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် U.S. High-Performance Computing and Communications Initiative က ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Mosaic ကို မထုတ်လွှတ်မီက ပုံမှန်အားဖြင့် web စာမျက်နှာများတွင် graphic များသည် စာသားများနှင့် အတူတကွမရှိဘဲ အင်တာနက်ပေါ်တွင် သုံးစွဲလျှက်ရှိသော Gopher နှင့် Wide Area Information Servers (WAIS)တို့ကဲ့သို့သော protocol ဟောင်းများထက် လူကြိုက်နည်းလျက်ရှိသည်။ Mosaic ၏ graphic ဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူများအတွက် မျက်နှာပြင်သည် လူကြိုက်အများဆုံး အင်တာနက် protocol သေချာပေါက် ဖြစ်လာစေသည်။
Domain အမည်များနှင့် HTML တို့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ ဖြည့်စွက်လျှက် ရှိနှင့်ပြီး အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတလွှားတွင် အခြားသော website များကို ဖန်တီးထားကြသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ Berners-Lee သည် web စံချိန်စံညွှန်းများ(ဥပမာ web စာမျက်နှာများ ဖန်တီးရေးသားသော markup languages)ကို သတ်မှတ်ရာတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး များမကြာမီနှစ်များတွင် ၎င်း၏ Semantic Web အယူအဆကို ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ World Wide Web သည် သုံးရလွယ်ကူပြီး ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ပုံစံဖြင့် အင်တာနက်ပေါ်တွင် သတင်းအချက်အလက်များကို ဖြန့်ဝေနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို လူသိများစေရန်ပြုလုပ်ရာတွင် အရေးပါခဲ့သည်။ဝေါဟာရနှစ်ခုကို ရောထွေးစွာ အသုံးပြုနေကြသော်လည်း World Wide Web နှင့် အင်တာနက် သည် အနက်တူသံကွဲစကား မဟုတ်ပါ။web သည် အင်တာနက်၏ အပေါ်ဆုံးရှိ အသုံးချprogram တစ်ခုဖြစ်သည်။
Web server က ဤဖိုင်များကို လက်ခံနေစဉ် ဘရောက်ဆာများသည် ၎င်း၏ HTML၊ Cascading Style Sheets (CSS) သို့မဟုတ် အခြား စာမျက်နှာကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သော ဘာသာစကားများက သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း စာမျက်နှာကို မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အဆင့်ဆင့် ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူ မြင်ရသော မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ web စာမျက်နှာကို ထုတ်လုပ်ရန် ရုပ်ပုံများနှင့် အခြား အရင်းအမြစ်များ ပါဝင်သည်။ web စာမျက်နှာ အများစုတွင် ဆက်နွယ်နေသော စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် ဆွဲချကူးယူနိုင်သော file များ၊ မူလ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြား web အရင်းအမြစ်များသို့ ချိတ်ဆက်ထားသော hyper link များ ပါဝင်သည်။ အသုံးဝင်ပြီး ဆက်နွယ်နေသော အရင်းမြစ်များများအချင်းချင်း hypertext အချိန်အဆက်များမှတဆင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသည့် ထိုကဲ့သို့သော အစုအစည်းကို web သတင်းအချက်အလက်များဟု ခေါ်ဆိုသည်။ အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်ခြင်းကို Tim Berners-Lee က WorldWideWeb (မူလ CamelCase တွင် တစ်ဆက်တည်းရေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ထိုသို့ မရေးတော့ချေ။) ဟု ၁၉၉၀ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ပထမဆုံး ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်။
ထိုကဲ့သို့သော ဝက်(ဘ်)ဆာဗာများသည် ဒိုမိန်းအရင်းခံ(ဥပမာ- example.com) နှင့် www ဒိုမိန်းခွဲ (ဥပမာ- www.example.com) နှစ်ခုလုံးက ဆိုဒ်တစ်ခုတည်းကို ရည်ညွှန်းရန် စီစဉ်ထားရှိသည်။ အခြားဝက်(ဘ်)ဆာဗာများမှာ ပုံစံ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခု လိုအပ်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားခြားနားသော ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ်များသို့ ညွှန်နိုင်သည်။ဝက်(ဘ်)ဆာဗာများ အစုအဝေးသို့ ရည်ညွန်းသော CNAME မှတ်တမ်း တစ်ခုကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဒိုမိန်းခွဲ အသုံးပြုခြင်းသည် နောင်လာမည့် ဝက်(ဘ်)သွားလာမှုတွင် အလုပ်ဝန် ညီမျှစေခြင်း အတွက် အသုံးဝင်သည်။ လက်ရှိတွင် ဒိုမိန်းခွဲတစ်ခုကိုသာ cname (အခြားအမည်တစ်ခု ပေးထားခြင်း) လုပ်နိုင်သောကြောင့် အခြေခံ ဒိုမိန်းအရင်းခံကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် တူညီသောရလဒ်ကို မရရှိနိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်သည် ဝက်(ဘ်)ဘရောက်ဆာ၏ လိပ်စာထည့်သွင်းရမည့်နေရာတွင် မပြည့်စုံသော ဝက်(ဘ်)လိပ်စာတစ်ခုကို ထည့်သွင်းပါက အချို့ ဝက်(ဘ်)ဘရောက်ဆာများသည် ရှေ့ဆက်စာလုံး "www" ကို ၎င်း၏ အစတွင် အလိုအလျောက်ထည့်ပေးပြီး အဆုံးတွင် ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု ယူဆရသည့် အရာပေါ်မူတည်၍ ".com"၊ ".org" နှင့် ".net" တို့ကို ထည့်ပေးနိုင်သည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွင် www ၏ အသံထွက် မှာ စာလုံးများ၏ သီးခြားအသံထွက်အတိုင်း ဖြစ်သည်။ အချို့ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူများ က dub-dub-dub ဟု အသံထွက်သော်လည်း မတွင်ကျယ်ပေ။ တစ်ခါက အင်္ဂလိပ် စာရေးဆရာ Douglas Adams က The Independent on Sunday (၁၉၉၉) တွင်- “World Wide Web ဆိုတာ ကျွန်တော်သိသမျှထဲမှာ သူ့ကို အတိုကောက်ပြုလုပ်လိုတဲ့ အရာထက် သုံးဆရှည်ရှည်ပြောရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အတိုကောက်ပုံစံပါပဲ” ဟု ခနဲ့တဲ့တဲ့ ပြောခဲ့သည်။ Stephen Fry က နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ "Podgrammes" မီဒီယာဖိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲများတွင် "wuh wuh wuh " ဟု အသံထွက်ခဲ့သည်။ Mandarin တရုတ်ဘာသာစကားတွင် World Wide Web ကို phono-semantic matching (အသံထွက်နှင့် အဓိပ္ပါယ် နှစ်ခုလုံးနှင့် လိုက်ဖက်ရန် ပြန်ဆိုခြင်း) မှတဆင့် wàn wéi wǎng (万维网) ဟု အများအားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုကြသည်။ ၎င်းသည် www နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး စာပေအရ “အတိုင်းအတာ ကွန်ယက်” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ဘာသာပြန်ဆိုမှုမှာ World Wide Web ၏ ဒီဇိုင်းအယူအဆနှင့် တစ်ဟုန်ထိုးတိုးပွားလာခြင်းကို အလွန် လျော်ကန်စွာ ထင်ဟပ်သည်။ Tim Berners-Lee ၏ web-space တွင် World Wide Web ကို သီးခြားစီဖြစ်သော စာလုံးသုံးလုံးဖြင့် စာလုံးပေါင်းပြီး စလုံးတလုံးစီကို စာလုံးကြီးအသုံးပြုကာ စာလုံများကြားတွင် hyphen များ မပါချေ။
Facebook တွင် U.S. ကောလိပ်ကျောင်းသားများမှသည် U.S. နိုင်ငံသား မဟုတ်သောသူ ၇၀%အထိ အခြေအနေ တိုးတက်လာပြီး၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ယင်း၏ အဖွဲ့ဝင် ၂၀%မျှသာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ချက် ဆက်တင်များကို အသုံးပြုကြသည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် (ကုမ္ပဏီကို တွဲဖက်တည်ထောင်ပြီးနောက် ခြောက်နှစ်အကြာ) Mark Zuckerberg က သုံးစွဲရန် အတော်ပင် ပိုမိုလွယ်ကူလှသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလျှို့ဝှက်ချက်ဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုများကို ထပ်ထည့်မည်ဟု ရေးခဲ့ပါသည်။နိုင်ငံပေါင်း ၆၀ မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ချက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်များက web အသုံးပြုသည့် ကလေးများနှင့် အခြား အရွယ်မရောက်သေးသော သူများအတွက် ပညာရေးနှင့်၊ လူမှုဆက်ဆံရေး ကွန်ယက်များကို အသုံးပြုသောသူများတွက် အလိုအလျောက် ကာကွယ်ရေးတို့အတွက်လုပ်ငန်း၏ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်သော စည်းမျဉ်းများကို ပြည့်စုံအောင် ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် ဥပဒေများကို တောင်းဆိုရန် သဘောပိုင်းဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ကိုယ်တိုင် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သော သတင်းအချက်အလက် အတွက် data ကာကွယ်ရေးသည် ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို ရောင်းချခြင်းထက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ပိုမို၍ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ထွန်းစေသည်ဟု ယင်းတို့က ယုံကြည်ကြပါသည်။အသုံးပြုသူများသည် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် သက်ဆိုင်သော မှတ်တမ်းများကို ၎င်းတို့ဘာသာ ရှင်းလင်းပစ်နိုင်ရန် browser များရှိ အဓိကဆွဲဆောင်မှုများကို ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ အချို့သော ကွတ်ကီးနှင့် ကြော်ငြာကွန်ယက်များ ကိုလည်း ပိတ်ဆို့ထားနိုင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း website များ၏ server logs များ၊ အထူးသဖြင့် web beacons များတွင် ခြေရာခံနိုင်ပါသေးသည်။ Berners-Lee နှင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် policy သိမြင်စေရန်အတွက် web ၏ တည်ဆောက်ပုံကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် တာဝန်ယူမှုနှင့် လျောက်ပတ်စွာ အသုံးပြုခြင်းတို့တွင် မျှော်လင့်ချက် တွေ့မြင်ထားပါသည်။ စစ်ဆေးသည့် မှတ်တမ်းရေးခြင်း၊ reasoned များနှင့် ကိရိယာ ပစ္စည်းများတို့ကို သုံးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အခမဲ့ အကြောင်းအရာများကို ထောက်ပံ့ပေးထားမှုကို အလဲအလှယ်ပြုသောအားဖြင့် ရောင်းချသူများသည် web အသုံးပြုသူများကို ထောက်လှမ်းသော ကြော်ငြာသမားများကို ငှားရမ်းထားပြီး၊ ယင်းတို့ကို ခြေရာခံထောက်လှမ်းခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးကို အခြေတည်ထားသည်။၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစ၍၊ စားသုံးသူများ၏ data များကို အလဲအလှယ်အားဖြင့် ဝယ်ယူ၊ ရောင်းချမှုများ ပြုလုပ်သည် (အမည်ဝှက်ထားခြင်းကို ဖော်နိုင်သော အချက်အလက် အသေးစိတ်အချို့ မရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်အား မည်သူမည်ဝါဟု ဖော်ထုတ်ခြင်း)။နေ့တစ်နေ့တွင် သန်းပေါင်း ရာချီကာ အသုံးပြုသူများ အမှန်တကယ်အသုံးပြုနေသည့် အချိန်တွင် မည်သည့် စာလုံးကို ရိုက်နေသည်ကို Lotame Solutions က ဖမ်းယူနိုင်ပြီး၊ အဆုံးအဖြတ်ပေးရန်၊ “မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးသည်၊ စာရေးသူက ထိုအကြောင်းအရာများအပေါ် မည်သို့သဘောထားသည်၊ ထိုအကြောင်းအရာများအတွက် ထိုသူက မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်” ကို The Wall Street Journal ရှိ စာရေးဆရာတစ်ယောက်အား ကိုးကားရန် OpenAmplify သို့ ပို့ပေးသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Microsoft က ယင်း၏ Internet Explorer ရှိ ပြင်းထန်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ထူးခြားချက်များနှင့် ပတ်သက်သော ၎င်း၏ အစီအစဉ်များမှ နောက်ဆုတ်လိုက်ပြီး၊ယင်း၏အသုံးပြုသူများအား (World Web အသုံးပြုသူများ၏ ၅၀%) ထိုသူတို့ website တစ်ခုသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ ကလစ်တစ်ခါ လုပ်ရုံမျှဖြင့် ယင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ယူဆချက်များပြုလုပ်မည့် ကြော်ငြာသမားများသို့ လမ်းဖွင့်ထားခဲ့သည်။ကြော်ငြာခြင်းမှ ပေးချေသော ဝန်ဆောင်မှုများအနက် yahoo သည် စီးပွားရော website များအား အသုံးပြုသူများ၏ data အချက်အလက်များ အများဆုံး စုဆောင်းနိုင်သည်။ တစ်လလျှင် ဆိုဒ်တစ်ခုနှင့် ယင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသော ကြော်ငြာ network site များ၏ စံနမူနာ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်၏ သတင်းအချက်အလက် ၂၅၀၀ ဘစ်ခန့် စုဆောင်းနိုင်ပါသည်။ My space က ထိုဖြစ်နိုင်ချေ၏ တစ်ဝက်ဖြင့် yahoo နောက်က လိုက်လျက်ရှိပြီး၊ AOL-Time Warner ၊ Google ၊ Facebook ၊ Microsoft၊နှင့် eBay တို့ ယင်းနောက်တွင် လိုက်ပါသည်။
Web သည် ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်သူများ၏ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသော software (malware)ကို ဖြန့်ဝေရာတွင် ပိုမိုနှစ်သက်ရာ လမ်းကြောင်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါသည်။ Website ပေါ်တွင် ကျူးလွန်ကြသော cyber ရာဇဝတ်မှုများတွင် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထား ခိုးယူခြင်း၊ လိမ်လည်မှု၊ သူလျှိုမှုနှင့် ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများ စုဆောင်းရေးတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ Web ကို အခြေခံသော အားနည်းမှုများသည် သမားရိုးကျ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အရာများထက် ယခုအခါတွင် အရေအတွက်အားဖြင့် ကျော်လွန်နေပါပြီ။ထို့ပြင် google ၏ တိုင်းတာချက်များအရ web စာမျက်နှာ ဆယ်ခုအနက် တစ်ခုခန့်တွင် ဖျက်ဆီးတတ်သည့် code များ ပါဝင်နိုင်နေပါသည်။
Web ကိုအခြေခံသော တိုက်ခိုက် ထိုးနှက်မှုများမှာ တရားဥပဒေနှင့် အညီထောင်ထားသော website များနှင့် အထူးသဖြင့် Sophos နှင့် တိုင်းတာချက်အရ United States ၊ တရုတ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့တွင် host များ ရှိနေသော website များ ဖြစ်ပါသည်။အများဆုံး မြင်တွေ့ရသော နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသော software ခြိမ်းခြောက်မှုများမှာ website အား SQL injection တိုက်ခိုက်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။HTML နှင့် URIs တို့မှတဆင့် Java စာလုံး မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် အတူ ပေါ်လာသော cross-site scripting (XSS) ကဲ့သို့ တိုက်ခိုက်မှုမျိုး များအား web သည် ခုခံမှုအားနည်းပြီး၊web 2.0 နှင့် စာလုံးများကို အသုံးပြုရန် လိုလားသော Ajax web ဒီဇိုင်း တို့ကြောင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပိုမိုပျက်စီးစေပါသည်။ယခုအခါတွင် ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုအရ website အားလုံး၏ ရ၀%၏ အသုံးပြုသူများအား XSS တိုက်ခိုက်မှုများသို့ ပွင့်လျက်ရှိနေပါသည်။
အဆိုပြုထားသော ဖြေရှင်းနည်းများမှာ အလွန်အကျူးပင် ကွဲပြားများပြားလှသည်။ McAfee ကဲ့သို့ ဗိုင်းရပ်(စ်)ကာကွယ်ရေး ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး software ရောင်းချသူများက ၉/၁၁ နောက်ပိုင်း စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသည့် အုပ်ချုပ်မှုနှင့် လေးစားလိုက်နာမှုများ ရှိသော အစုံလိုက်ပစ္စည်းများကို တီထွင်ပြီး ဖြစ်သည်။ Finjan ကဲ့သို့ အချို့သော ကုမ္ပဏီများမှာ မည်သည့်အရင်းအမြစ်မှပင် ဖြစ်ပါစေ code နှင့် ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို နိုးကြားစွာဖြင့် တကယ်ဖြစ်ပွားနေသော အချိန်တွင် စစ်ဆေးခြင်းပြုရန် ထောက်ခံသည်။ ubiquitous ကဲ့သို့ ကွန်ပျူတာ လုံခြုံရေးစနစ် ရောင်းသူအချို့တို့က ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ် အသစ်များကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပြီး၊ နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသော software များ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားခြင်း၊ စပဲမ်းနှင့် ဇုမ်းဘီး ဦးတည်ရာလမ်းကြောင်းများကို တကယ်ဖြစ်ပွားနေသော အချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခြင်းများကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့် ကိရိယာများနှင့် တကွ၊ သတင်းပို့သည့် ကိရိယာများဖြင့် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
လုံခြုံရေးကို ကုန်ကျမှုစင်တာ တစ်ခုအဖြစ်ထက် စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းတစ်ခု အနေဖြင့် မြင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်၊အခြေခံဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံထဲတွင် “နေရာအနှံ့ရှိသော၊ အမြဲတမ်းဖွင့်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် ပတ်သက်သော အခွင့်အရေးများ”ကို အတည်ပြုလိုက်နာစေသော လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသော အဖွဲ့အစည်းများ၏နေရာတွင် ယနေ့ data များနှင့် ကွန်ယက်များကို လုံခြုံစိတ်ချရအောင် လုပ်ပေးနေသည့် ရာနှင့် ချီသော အဖွဲ့အစည်းများက အစားထိုးသင့်သည်ဟု အချို့က အကျိုးအကြောင်းပြ ပြောဆိုသည်။အင်တာနက်ကို သော့ခတ်ပိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းထက် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုမှု လုံခြုံရေးအတွက် အသုံးပြုသူများက တာဝန်ခွဲဝေယူခြင်းက အထူးပိုမိုသာလွန် နှစ်သက်စရာဖြစ်သည်ဟု Jonathan Zittrain က ပြောပါသည်။
ထုံးတမ်းစဉ်လာ သတ်မှတ် စံနှုန်းအများအပြားနှင့် အခြား နည်းပညာဆိုင်ရာ သီးခြားပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ဆော့(ဖ်)ဝဲတို့သည် World Wide Web ၊အင်တာနက်နှင့် ကွန်ပျူတာ သတင်းအချက်အလက် ဖလှယ်ခြင်း၏ အသွင်အပြင်အမျိုးမျိုးအား လည်ပတ်မောင်းနှင်မှုကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ စာရွက်စာတမ်းအများအပြားမှာ ဘာနာ(စ်)-လီး ခေါင်းဆောင်သော World Wide Web Consortium (W3C) ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချို့တို့မှာ အင်တာနက် အင်ဂျင်နီယာပညာ စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ (Internet Engineering Task Force)(IETF)နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယျေဘုယျအားဖြင့် ဝက်(ဘ်)စံနှုန်းများကို ဆွေးနွေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေချက်များကို အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် တွေ့ရသည်။ -
markup languages အတွက် ထောက်ခံချက်များ၊ အထူးသဖြင့် W3C မှ HTML နှင့် XHTML။ ဤတို့သည် hypertext စာရွက်စာတမ်းများ၏ တည်ဆောက်ပုံနှင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။
World Wide Web အတွက် အခြားမရှိမဖြစ် လိုအပ်သော နည်းပညာများ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးသော အခြား ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယင်းတို့ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားပါ။ -
Uniform Resource Identifier (URI)၊ အင်တာနက်ပေါ်တွင် hypertext စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ရုပ်ပုံများကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို ကိုးကားခြင်းအတွက် အများနှင့်ဆိုင်သော စနစ်။ မကြာခဏဆိုသလို URL ဟုခေါ်သော URI များကို IETF ၏ RFC 3986 / STD 66: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသည်။ ထိုနည်းတူ ယင်းထက် အရင်ကျသောအရာများနှင့် များပြားလှစွာသော URI scheme အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းRFCs ဖြင့် အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုပါသည်။
HyperText Transfer Protocol (HTTP)၊ အထူးသဖြင့် RFC 2616: HTTP/1.1နှင့် RFC 2617: HTTP Authentication တို့ဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ browserနှင့်serverတို့ တစ်ခုနှင့် တစ်ခု အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း မည်သို့ ထင်ရှားစေကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
Web သို့ဆက်သွယ် ရယူခြင်းသည် အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံ၊ ကိုယ်အင်္ဂါ၊ စကားပြော၊ သိမှတ်နိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အာရုံကြောဆိုင်ရာများတို့တွင် ချို့တဲ့အားနည်းမှုတို့ကို ပမာမထား၊ လူသား အားလုံးတို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရယူခြင်း လက္ခဏာများသည် ယာယီ ချို့တဲ့အားနည်းမှု ဖြစ်သည့် လက်ကျိုးခြင်း သို့မဟုတ် စွမ်းရည်များ ပြောင်းလဲသွားသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်လည်း ကူညီထောက်ပံ့မှု ဖြစ်စေပါသည်။သတင်းအချက်အလက်များ လက်ခံရယူနိုင်ရန် web ကို အသုံးပြုသကဲ့သို့ သတင်းအချက်အလက်များ ပေးပို့ခြင်းနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်ခြင်းတို့တွင်လည်း သုံးပါသည်။ မသန်မစွမ်းမှုများ ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များအား တန်းတူဆက်သွယ်နိုင်ခွင့်နှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးပေးရန် ရည်ရွယ်ပြီး web ကို ဆက်သွယ်ရယူခြင်းကို ပြုလုပ်နိုင်ရန် အခြေခံကျစွာ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
တစ်ခါက Tim Berners-Lee က ဤသို့ မှတ်သားခဲ့သည် “ web ၏ စွမ်းအားမှာ ယင်း၏ အရာခပ်သိမ်းနှင့်စပ်ဆိုင်မှု၌ ရှိသည်။ ချို့တဲ့အားနည်းမှုတို့ကို ပမာမထားဘဲ လူသားတိုင်း ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ရန်မှာ ယင်း၏ မရှိမဖြစ်သော အသွင်အပြင်တစ်ခု ဖြစ်သည်။” တိုင်းပြည်အများအပြားသည် website များအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ် web ဆက်သွယ်ရယူခြင်း စည်းမျဉ်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ W3C Web Accessibility Initiative တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမှ software တီထွင်သူများအပါအဝင် web ပါ အကြောင်းအရာများကို ရေးသားသူများက ထောက်ပံ့မှုနည်းပညာများကို အသုံးပြုကောင်းပြုနိုင်သော၊ သို့မဟုတ် မပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ web ကို ဆက်သွယ်ရယူအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရိုးရိုး လမ်းညွှန်ချက်များ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါသည်။
W3C နိုင်ငံတကာမှုပြုခြင်း အတွက် လှုပ်ရှားမှုသည် web နည်းပညာသည် အားလုံးသော ဘာသာစကား၊ အရေးသားစာလုံးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်းကို သေချာစေပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် သို့မဟုတ် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော ယူနီကုတ်သည် အခြေခိုင်မှုကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံး၌ ၂၀၀၇ဒီဇင်ဘာလတွင် web ၏ မကြာခဏ အသုံးများဆုံး စာလုံးဝှက်စာဖော်ခြင်း အဖြစ် ASCII နှင့် အနောက်ဥရောပ နှစ်ခုလုံးတို့တွင် သာလွန်သွားခဲ့ပါသည်။ မူလပထမက RFC 3986 သည် US-ASCII ၏ လက်အောက်ခံ အုပ်စုအတွင်းရှိ URI ဖြင့် အရင်းအမြစ်များ ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းကို ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ RFC 3987က တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်ဆိုင်သော စာလုံးအစုံ (Universal Character Set)အတွင်းရှိ မည်သည့် စာလုံးကိုမဆို ပိုမိုများပြားသော စာလုံးများကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ အရင်းအမြစ်တစ်ခုကို မည်သည့် ဘာသာဖြင့်မဆို IRI ဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်ပါသည်။။
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာချက်တစ်ခုအရ web ပေါ်တွင် စာရွက်စာတမ်းပေါင်း ၅၅၀ ဘီလီယံကျော်မျှ အလုံးအရင်းနှင့် ရှိနေပါသည်။ မမြင်ရသော web သို့မဟုတ် deep Web များပေါ်တွင် ဖြစ်သည်။၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် သန်းပေါင်း ၂၀၂၄ မျှသော web စာမျက်နှာများ အပေါ် ကောက်ယူသောစစ်တမ်းအရ web တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အများဆုံး ရာခိုင်နှုန်း ၅၆.၄% ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းနောက်တွင် ဂျာမနီ (၇.၇%)၊ ပြင်သစ် (၅.၆၇%) နှင့် ဂျပန် (၄.၉%)တို့ ဖြစ်သည်။ web တစ်ခုကို နမူနာယူရန် ဘာသာစကားပေါင်း ရ၅ ခုကို အသုံးပြု၍ web ရှာဖွေခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သော မကြာသေးမီက လေ့လာချက်တစ်ခုအရ၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်တွင် အထင်ကရညွှန်ပြနိုင်သော web (publicly indexable Web)၌ web စာမျက်နှာပေါင်း ၁၁.၅ ဘီလီယံကျော်ရှိသည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လတွင်၊ ညွှန်ပြနိုင်သော web တွင် အနည်းဆုံး စာမျက်နှာပေါင်း ၂၅.၂၁ ဘီလီယံ ရှိလာပါသည်။၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် google software အင်ဂျင်နီယာ Jesse Alpert နှင့် Nissan Hajaj တို့ကURLပေါင်း သန်းပေါင်းတစ်သောင်း google ရှာဖွေရေးပေါ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။၂၀၀၉ ခုနှစ် မေလတွင် website ၁၀၉.၅ သန်းကျော် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေပါသည်။ယင်းတို့အနက် ၇၄%မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အခြားဆိုဒ်များ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ထိပ်တန်းအဆင့် domain .com တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသော ဆိုဒ်များဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်တွင် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော အစိတ်အပိုင်းများရှိ ပြည့်ကျပ်ခြင်း အကြောင်းများ အပေါ် စိတ်ပျက်ရခြင်းနှင့် browse လုပ်ရာတွင် နှေးကွေးစေသော မြင့်မားသော နှောင့်နှေးသော အချိန်ကိုတိုင်းတာခြင်း တို့မှာ World Wide Web အတွက် အဓိပ္ပါယ် ယုတ်ညံ့စေသောနာမည် World Wide Wait ဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။အင်တာနက်၏ အမြန်နှုန်းကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် peering နှင့် QoS နည်းပညာများ အသုံးပြုခြင်းများအပေါ် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော ဆွေးနွေးချက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပြည့်ကျပ်ခြင်းကို လျှော့ချရန်အတွက် အခြားအဖြေများကို W3C တွင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ website မှ တုံ့ပြန်သည့် စံပြအချိန်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသော လမ်းညွှန်ချက်များမှာ-
Website တွင် ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများကို သိုလှောင်နိုင်သည့် အင်တာနက်၏ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများလည်း ရှိပါသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ Fire wall များသည် အားလုံး၏အကျိုးအတွက် အသုံးပြုသူ တစ်ဦးက တောင်းဆိုသော web အရင်းအမြစ်များကို မကြာခဏဆိုသလိုပင် သိုလှောင်ထားတတ်ပါသည်။ (ဒါလည်းကြည့်ပါ - proxy server သိုလှောင်ခြင်း) အချို့သော ရှာဖွေရေး အင်ဂျင်များသည် website များမှ သိုလှောင်ထားသည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း သိုလှောင်သည်။ ဖိုင်များကို မွမ်းမံထားပြီးကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြန်လည်ပို့ပေးရန် လိုအပ်ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သော web server များထဲတွင် တည်ဆောက်ထားသည့် လိုအပ်သည့် အထောက်အကူ ပစ္စည်းများမှအပ၊ အားကောင်းစွာ ထုတ်လုပ်ပေးသော web စာမျက်နှာများ၏ ဒီဇိုင်းနာများသည် တောင်းဆိုသော အသုံးပြုသူများထံသို့ HTTP ခေါင်းစဉ်များ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အကူးအပြောင်း စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် အထိအခိုက်မခံနိုင်သော စာမျက်နှာများကို သိုလှောင်ထားခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ အင်တာနက် ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆိုဒ်အသစ်များသည် ဤလိုအပ်သော အထောက်အကူပစ္စည်းကို မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ HTTP 'GET' တစ်ခုဖြင့် တောင်းဆိုထားသည့် ဒေတာမှာ အခြားသောအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပါက သိုလှောင်ထားခြင်း ခံရနိုင်သည်။ 'POST' တစ်ခုကို တုံ့ပြန်သောအခါ ရယူလိုက်သည့် data မှာ POSTed လုပ်ထားသော data ပေါ်တွင် မှီခိုနေသည်ဟု ယူဆသောကြောင့် ယင်းကို သိုလှောင်ထားမည် မဟုတ်ပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝက်ဘ်&oldid=498736" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀၊ ၁၃:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။